Dowladda oo canshuurta ku kordhinaysa Badeecadaha Dekada iyo Garoonka ka soo dega – STAR FM SOMALIA
Dowladda oo canshuurta ku kordhinaysa Badeecadaha Dekada iyo Garoonka ka soo dega
Dowladda Somaliya ayaa sheegtay in la kordhinaayo Qiimaha laga qaado badeecadaha kala duwan ee ka soo dega Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde iyo Dekada caalamiga ee Muqdisho.
Ra’iisul ku xigeenka Xukuumadda Somaliya oo Shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho,ayaa sheegay in marka laga reebo raashinka, Badeecadaha ka soo dega Garoonka Diyaaradaha iyo Dekadda Muqdisho lagu kordhinayo Canshuurta laga qaado xilligaan.
Waxa uu sheegay in looga gol leeyahay wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka,waxaana uu intaas ku daray in Xafiisyada Ra’iisul Wasaaraha,Madaxweynaha iyo Guddoonka Golaha Shacabka ay weydiisteen lacago lagu taakuleeyo dadka ay aabaraha saameeyeen.
Sidoo kale shaqaalaha Dowladda iyo Ganacsatada ayuu sheegay in laga qaadayo lacago lagu taageero dadka ay abaaraha ku saameeyeen Somaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay u sheegay in la kordhinaayo Canshuurta laga qaado dadka ganacsatada ah ee dalka ku sugam.
Qaabka Gargaarkaasi loogu qeybinayo gobollada ay abaarta ku dhufatay ayuu Ra’iisul Wasaare ku xigeenka sheegay in ay ka shaqeynayaan Guddi gaar ah oo ay u xil saareen in ay ka shaqeeyaan qiimeynta meelaha ugu daran ee ay abaartu ka jirto.
Al-shabaab Ayaa Dil Toogasho ah ku Fuliyey Sedax Dhalinyaro ah
Human Rights Watch oo ku baaqday baaritaan caalami ah in lagu sameeyo xasuuqa Amisom ee Somaliya